About Us - Ningbo Master Soken elektrika CO., LTD
Ningbo Master Soken elektrika Co., Ltd. dia tale mpikambana ao amin'ny China elektrika Appliance Industry Association momba ny elektrika Accessories sy ny an-trano-maso ny sampana. Matihanina isika amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, sy ny nanaovany famokarana isan-karazany ny Switches. Ny entana miainga amin'ny davarangany Switches, Rotary jiro, hanoto-bokotra Switches, sy ny famantarana fototra Switches jiro. Ny zavatra be dia ampiasaina amin'ny sehatra maro toy ny fitaovana an-trano, orinasa toerana, fitaovana fifandraisana, metatra sy instuments amin'ny vatana-tarehy fanorenana fitaovana sns
Ny orinasa no misy any atsimo elatry ny Reniranon'i Yangtze Vinanin'i amin'ny hery ara-toekarena, aiza ny malaza pirenena dimy Toerana mahafinaritra ny ambaratonga-toerana Xikou Ningbo. Ny orinasa dia manana soa azon'ny tena mety tontolo iainana amin'ny fitaterana. Ny orinasa maka ny 16.000 metatra toradroa toy ny tokotany sy ny 25.000 metatra toradroa ny atrikasa. Ny orinasa dia manana mihoatra ny 1000 ny mpiasa, anisan'izany ny R & D sy technic injeniera maherin'ny 50 ny isan-taona Output dia maherin'ny 150 tapitrisa farantsa. Ny orinasa dia amin'ny voalohany anivon'ny asa tanana ao an-toerana ireo rahalahy.
Ny orinasa nandalo ny ISO19001 kalitaon'ny rafitra fitantanana tamin'ny Jolay, 1997 ary passeded ISO14001Environmental rafitra fitantanana tamin'ny Oktobra, 2004 ny rafitra ho marina amin'i Ceaselessness kokoa dingana PDCA tsingerina. SOKEN ho toy ny marika, dia ny Zhejiang marika malaza sy Ningbo-marika malaza vokatra. Ny orinasa nanao ny laboratoara araka ny Ul TUV fisafoana fenitra. Ny ankamaroan'ireo vokatra efa nahazo Ul, VDE, TUV, ENEC, KEMA, K, CQC, CCCD fiarovana fankatoavana sy ny taratasy fanamarinana sy ny RoHS-mifanaraka tsara.
Ny orinasa dia mbola hampihatra ny tenany amin'ny fitantanana hevitry ny "toetra sy ny asa fanompoana" ary mikatsaka ny tonga lafatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa fanompoana amin'ny tanterak'i. Manantena izahay mba hamantatra ny tsara indrindra hanome fahafaham-po ny mpanjifa fitakian'ny ao amin'ny maximal ambaratonga.